Nagarik Shukrabar - सेक्स लत छुटाउन मनो परामर्श
सोमबार, ११ असार २०७५, ०७ : ५२
सेक्स लत छुटाउन मनो परामर्श
शनिबार, २० कार्तिक २०७३, ११ : ४५ | डा. रवि शाक्य , Kathmandu
मेरो श्रीमान् मसँग समय मिल्दा दिनकै तीन÷चारचोटिसम्म सेक्स गर्नुहुन्छ । उहाँका अरू पनि सेक्स पार्टनर छन् । यसले गर्दा हाम्रो दाम्पत्य जीवनै टुट्लाजस्तो भइसक्यो । हामी डिभोर्स गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ । जतिखेर पनि सेक्सका लागि तयार भइहाल्ने उहाँको बानी देखेर छक्क पर्छु । सेक्स बढी गर्न मन लाग्ने कुनै रोग हो कि ? मेरो श्रीमान्को यस्तो समस्याको कुनै उपचार होला ?
यौन व्यवहार व्यक्तिको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानु नै सेक्स लत हो । यस्तो लत बसेका मानिस अधिकांश समय सेक्सकै बारेमा सोचेर बिताउँछन् । अश्लील फिल्म वा साइट हेर्नु उनीहरूको दिनचर्या नै बन्न सक्छ । यसले मानिसको व्यवहारमा समेत परिवर्तन आउन थाल्छ । यसको असरले व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक जीवन नै ध्वस्त हुन पुग्छ । सेक्सले लतको रूप लियो भने मानिस बलात्कारसम्म गर्न पनि पछि पर्दैन । यस्तो लत लागेका मानिसहरू प्रायः एक्लै बस्न रुचाउँछन् । यिनीहरूले प्रायः असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्ने हँुदा कतिपय अवस्थामा यौनजन्य रोगको पनि शिकार भएको पाइन्छ ।